Xasan Daahir Aweys: “Sheikh Shariif waan ku aqaane dadka ha qiyaamin” | Somsoon
Home ARAGTIDA Xasan Daahir Aweys: “Sheikh Shariif waan ku aqaane dadka ha qiyaamin”
Xasan Daahir Aweys: “Sheikh Shariif waan ku aqaane dadka ha qiyaamin”
Xasan Daahir Aweys oo maxbuus u ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weerar culus oo aan loo meel dayin ku qaaday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed horeyna ay iskala tirsanaayeen Maxaakiimtii islaamiga.
Xasan Daahir ayaa Shariif Sheikh ku eedeeyey inuusan isaga cadowga iyo mooryaanta ka saarin dalka balse uu isaga si fudud ku helay xilka uuna mid cidlaa uga tagay dadkii shaqadaas qabtay.
Wuxuu ku eedeeyey inuu Sheikh Shariif yahay nin dadka ku daneysta markii dantiisa uu gaarana meel cidlaa uga taga.
Xasan Daahir ayaa Shariif Sheikh ugu baaqay inuu Alle ka cabsado isla markaasna uu joojiyo dadka uu qiyaamayo.
” Markii ugu dambeysay Xasan Sheikh ayuu siin waayey 40 cod oo uu heystay xilligii doorashada, howsha waxay aheyd qabiil, markii uu codka siin waayey ayaan ka quustay Sheikh Shariif” ayuu yiri Xasan Daahir Aweys.
Article horeRW Kheyre oo kulan gaar ah la yeeshay Emmanuel Macron
Article socoda Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirkii Horumarka iyo Dadweynaha